Wafdi ka socoda Baarlamaanka Soomaaliya oo lagu soo dhaweyey Mareykanka – Balcad.com Teyteyleey
Wafdigan waxaa kamid ahaa xildhibaan Xaniifa Maxmed Ibraahim Xaabsade, Samsam Maxmed, iyo Faadumo Abuukar,waxaan halkaasi ka hadashey xildhibaan Ilhaan Cumar oo sheegaty in booqashadooda ay wax weyn ku soo kordhinayso farxadaaha Soomaalida ku nool Mareykanka.
Munaasabadan ballaaran oo lagu soo dhaweynayay xildhibaanada ka tirsan Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo booqasho ku jooga Dalka Mareykanka ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee Gobolka Minnesota ,waxaana ka qeybgalay Jaaliyadda Soomaaliyeed,Xildhibaan Ilhaan Cumar iyo Duqa magaalada Minneapolis.
Sidoo kale, waxaa halkaasi ka hadashey Haweeneyda Duqa magaalada ka ah Minneapolis, iyadoo muujisay sida ay maamulkedu uu diyaarka ugu yahay garab istaaga bulshada Soomaaliyeed,waxayna xusatay in ay ka shaqeynayso sidii loo horumarin lahaa nolosha Jaaliyadda Soomaaliyeed ee kunool magaaladaasi.
Xildhibaan Xaniif Maxamed Ibraahim Xaabsade iyo Samsam Maxmed oo ka mid ah wafdigan oo ka socoday Golayaasha Shacabka iyo aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa warbixin ka siiyay xaaladda dalka, iyagoo sheegay in looga baahanyahay Qurba joogta Soomaaliyeed in ay ka qeybqaataan dib u dhiska Dalkooda.
Wafdigan ayaa intii uu joogay Mareykanka waxaa uu kulamo uu la yeeshey mas’uuliyiinta qaar kamid ah hay’adaha iyo golayaasha Dowladda Mareykanka waxayna u kuurgalayeen sida ay u socdaan howlaha dastuurkiga ah ee hay’adahaasi.
The post Wafdi ka socoda Baarlamaanka Soomaaliya oo lagu soo dhaweyey Mareykanka appeared first on Ilwareed Online.
Dhageyso:-Xildhibaan Coloow: “Waa in Maxkamad la horgeeyaa Askarigii isku dayay in uu na dilo”